Cyberfestival နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ခြင်း - ကမ္ဘာ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » တရားဝင်ဆက်သွယ်ရေး » ပိုးမွှားများနျူကလီးယားလက်နက်မှကင်းဝေးသည်
ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ CyberFestival နျူကလီးယားလက်နက်များအခမဲ့ ၁၉၀ ခုကိုကောက်ယူသည်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားများသည်နျူကလီးယားလက်နက်များတားမြစ်ခြင်းစာချုပ်ပါ ၀ င်မှုအားဂုဏ်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။TPAN22/1/2021 ရက်တွင်ကုလသမဂ္ဂ၌ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနိုင်ငံပေါင်း ၈၆ နိုင်ငံ၏လက်မှတ်ပေါင်း ၅၁ ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်နျူကလီးယားအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်ရဲရင့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ICAN အတွင်း၎င်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင်တိုက်ကြီးအားလုံးရှိနိုင်ငံများတွင်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန်အဖြစ်အပျက်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ကိုကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ဒီ CyberFestival သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ နျူကလီးယားလက်နက်များသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှအပြီးသတ်အမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ပြီးသည်အထိလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ဤမှောင်မိုက်သောအခန်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သူကအနည်းငယ်မျှသာပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။
၁၀ နာရီလုံးလုံး Zoom နှင့် Facebook လိုင်းများမှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့်ပတ်သက်သောသင်္ကေတသီချင်းများ၊ ကြေငြာချက်များ၊ လုပ်ရပ်များနှင့်ကမ္ဘာ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပြန်လည်ဖျော်ဖြေမည့်ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များကို ၁၀ နာရီကြာပြသပါမည်။ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့်လက်ရှိရည်ညွှန်းချက်များ၊ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြေငြာချက်များ၊ ပါလီမန်အမတ်များနှင့်မြူနီစီပယ်များထံမှထောက်ခံမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ထောက်ခံမှု၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သာမန်နိုင်ငံသားများ၊ လူငယ်များ၊ ပြပွဲများ၊ စုဆောင်းမှုများ၊ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတများဖြင့်သူတို့ချီတက်ပွဲများ၊ ပြပွဲများ၊ စစ်ပွဲများမရှိဘဲကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အရာများနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်များကင်းမဲ့နေခြင်းကိုကာကွယ်ကြသည်။
ဤသည်၌ CyberFestival ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုသည်နျူကလီးယားလက်နက်များအခမဲ့ဖြစ်သည် ¡လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောခြေလှမ်း! တိုက်ကြီးအားလုံးမှရာနှင့်ချီသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောလူများပါဝင်သည့်လှုပ်ရှားမှုပေါင်း ၁၉၀ ကိုစုဆောင်းထားသည်။
တစ်ရက်: ဇန်နဝါရီလ 23 2021
နာရီ: Cyberfestival သည် 10:30 GMT-0 တွင်စတင်ပြီး GTM-20 နာရီ ၂၀း၃၀ တွင်အဆုံးသတ်ပါမည်။
တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီစီကြာသောပထမနှင့်နောက်ဆုံးလုပ်ကွက်များသည်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် TPAN ၏အင်အားဖြည့်တင်းမှုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရေးကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုစုစည်းထုတ်လွှင့်ရန်ရည်စူးလိမ့်မည်။
အကြား၌ရှိသော ၈ နာရီသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏အကြောင်းအရာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာများကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပထဝီအနေအထားတစ်ခုစီနှင့်ကိုက်ညီသည် - Oceania-Asia နှင့် Europe-Africa-America ။
အချို့သည်သမိုင်း ၀ င်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပြီးခေတ်ကိုမှတ်သားစေသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အကြောင်းအရာများ၊ အချိန်ဇယားများနှင့်သင်တန်းသားများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ရှိသည်။
အခြားအကြောင်းအရာများ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများအပြင်အချို့သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ရပ် ၁၅၇ ခု ဒီနေ့ဟာတိုက်ကြီးတွေအားလုံးကို ICAN အဖွဲ့အစည်းတွေကပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။
အဲဒါအရေးကြီးတယ် ဒီသမိုင်းသစ်ဇာတ်စင်၏မြင်နိုင်. ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတည်ပြုနိုင်သကဲ့သို့ TPAN ၏အတည်ပြုချက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည့်သတင်းစာကြီးများ၏ရှေ့စာမျက်နှာများတွင်မဟုတ်ပါ၊ တီဗီကွန်ယက်ကြီးများ၏သတင်းများကိုဖွင့်ပေးသည်။ TPAN ကိုအစိုးရများကထောက်ခံပြီး (သို့) အတည်ပြုပေးခဲ့သောနိုင်ငံများစွာတွင် ၄ င်းတို့၏နိုင်ငံသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏နိုင်ငံသားများကိုမသိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ မီဒီယာများမှဤပြissueနာကိုပြင်းထန်စွာဖုံးကွယ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရေးကြီးသောအချက်ကိုလူကြိုက်များသည့်အဆင့်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းဖြင့်မြင်အောင်လုပ်ရန်၊ ၎င်းအားလက်နက်များကိုအတိအလင်းဆန့်ကျင်သောလူငယ်လူရွယ်များ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုအများဆုံးဖြန့်ဝေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းဖြေ - ဒီအစီအစဉ်ကို MSGySV ကတိုးမြှင့်ခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီ CyberFestival ဟာလူအများစုနဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပြီး၊
ရည်ရွယ်ချက်သစ်မှာဤ CyberFestival ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအသစ်အုပ်စုသည် TPAN တွင်ပါ ၀ င်သည်၊ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းသည်။
စစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်မှု TPAN ၏အင်အားသုံးသို့ entry ကိုအပေါ်
COSTA RICA တွင်ဖိအားပေးကွန်ဖရင့် -